होटल–पार्टी प्यालेसमा भोज, पार्किङ सडकमा?
- नेपाली सन्देश शनिबार, अशोज १३, २०७५ , 11.1K जनाले हेर्नुभयो
बिहे–ब्रतबन्धको सिजनमा राजधानीका ठूल्ठूला होटल र पार्टी प्यालेसको चाँदीकटाइ हुन्छ। कुनै दिन ठाउँ खाली हुन्न। कति पार्टी प्यालेस त महिनौंअघि ‘बुकिङ’ गर्नुपर्छ।
क्षमता हुनेले पार्टी खुवाउँछन्। खुवाऊन्। हजार–दुई हजार मान्छे डाक्छन्। डाकून्। निम्तालुहरू महँगा गाडी चढेर आउँछन्। आऊन्।
भोज पनि खुवाऊन्, पाहुना पनि आऊन्। तर, बाटो हिँडडुल गर्ने सारा जनताले दुःख किन पाऊन्?
हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं, राजधानीका केही पाँचतारे होटल र पार्टी प्यालेसबाट हुँदै आएको सडक अतिक्रमणको।
तपाईंहरूले याद गर्नुभएकै होला, जब–जब यस्ता होटल र पार्टी प्यालेसमा ठूलो भोज चल्छ, गाडीको ताँती लाग्छ। कम्पाउन्डभित्र नअटेर बाहिर सडकभरि गाडी ठ्यास्स रोकिएका हुन्छन्।
काठमाडौंका सडक त्यसै त साँघुरा। त्यसमाथि भोज खान आउने निम्तालुका गाडीले सर्लक्कै एकलेन ढाकेपछि के हालत होला?
ट्याँट्याँ, टुँटुँ। जाम। मान्छेलाई हिँड्नधरि सकस।
भोज एउटाको। खान आउने अर्को। दुःख पाउने सारा जनता!
यस्तो बेला भोजवाला होटल र पार्टी प्यालेसका सुरक्षागार्डलाई हेर्नुपर्छ। चुरीफुरी नै बेग्लै। बडो ट्राफिकले झैं सिठी फुक्दै गाडी रोकिरहेको हुन्छ। हाम्रो सुविधाका लागि होइन। त्यहीँ आएका पाहुनाको गाडी निकाल्न र भित्र छिराउन। पाहुनाको गाडीलाई बाटो दिनुछ भने सडकभरिका गाडी रोक्दिन्छन्।
यस्ता होटल र पार्टी प्यालेसको त आफ्नै पार्किङ हुनुपर्यो नि, होइन?
भए पनि कहिलेकाहीँ पुग्दैन। कम्पाउन्डमा नअटेका गाडी सडकमा लस्कर लाग्छन्। धेरै भीडभाडमा त कम्पाउन्ड वरिपरि गाडीको सेलरोटी बन्छ।
सडक सार्वजनिक सम्पत्ति हो। जति गाडीको, त्यति नै पैदलयात्रुको। गाडी पार्क गरेर सडक साँघुरो पार्ने हक कसैलाई छैन। होटल वा पार्टी प्यालेसको सम्पत्ति भनेको उसको मूलढोकासम्म हो। उसले आफ्नो सीमाभित्र नअट्ने गाडीलाई पार्टीमा प्रवेशै दिनु भएन। दिने भए आफ्नै सीमाभित्र अटाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्यो।
उसकहाँ भोज खान आउनेका गाडीले बाटो हिँड्ने सर्वसाधारणलाई दुःख किन?
सडक किनार रोकिएका मोटरसाइकल र स्कुटरलाई ट्रकमा राखेर बग्गीखाना पुर्याइएको दृश्य हामीले धेरै देखेका छौं, भोगेका छौं।
मोटरसाइकल, स्कुटरले यसरी जथाभाबी पार्क गर्नु गलत हो। यही नियम होटल र पार्टी प्यालेस अगाडि लमतन्न सयौं गाडीलाई पनि त लागू हुनुपर्यो! तिनलाई पनि उचालेर बग्गीखाना लगिनुपर्यो!
किन लगिन्न? यो त ट्राफिक नियमको बोझ धान्ने सारा जिम्मा साना सवारीलाई मात्र थोपरेजस्तो भएन र?
हामी यिनै प्रश्न लिएर महानगरीय ट्राफिक विभाग प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तकहाँ गयौं।
उनले सुरुमा त ‘उपत्यकाका कुनै पनि सडक वा फुटपाथमा सवारी पार्क गर्न नपाइने’ बताए।
दरबारमार्ग, न्युरोडको पिनट्स र विशाल बजार, बागबजार पद्मकन्या क्याम्पस अगाडि लगायत आधा दर्जनजति ठाउँमा सडकछेउ पार्किङ गर्न छुट दिइएको जानकारी पनि दिए।
यति हुँदाहुँदै, विशेष परिस्थितिमा ट्राफिक कार्यालयले महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर केही स्थानमा पार्किङ तोक्ने गरेको उनले बताए।
उनले भनेको यो विशेष परिस्थिति के होटल वा पार्टी प्यालेसका हकमा लागू हुन्छ?
हाम्रो यो प्रश्नमा एसएसपी पन्तले भने, ‘ठूला होटल र कुनै ठाउँमा ठूलो कार्यक्रम भए, त्यहाँ यथेष्ट पार्किङ हुँदैन। त्यस्ता ठाउँमा सडकको एकछेउ पार्किङ व्यवस्था मिलाइदिएर ट्राफिकले सहयोग गरेको हो। नियमले त पाइँदैन। तर, कार्यक्रम पनि रोक्न नमिल्ने, र होटल वा पार्टी प्यालेसको पार्किङ क्षमता पनि बढाउन नमिल्ने। भद्रगोल नहोस् भनेर पार्क गर्न दिइएको हो। सहज बनाइएको हो।’
यसको मतलब, नियमले नपाइने थाहा हुँदाहुँदै ट्राफिक प्रहरीले होटल र पार्टी प्यालेसको कल्याण गरिदिँदै आएका छन्।
के यो सही हो?
करोडौं कारोबार गर्ने त्यस्ता नाफामूलक व्यावसायिक संस्थाले भोज खुवाएर मनग्य आर्थिक लाभ लिइरहेका हुन्छन्। आफूलाई चाहिनेजति पार्किङ बनाउनु वा व्यवस्थापन गर्नु उसको जिम्मेवारी हो।
कुनै समारोहमा गाडी अट्दैन भने त्यो उसको टाउकोदुखाइ हो। त्यसको बोझ ट्राफिक प्रहरीले किन लिने? अनि, त्यही बोझ सर्वसाधारणमाथि किन थोपर्ने?
‘हामीले यस्ता पार्टी प्यालेस वा होटल पर्याप्त पार्किङ व्यवस्था गरेर रिङरोडभन्दा बाहिर राख्न सुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘जाम व्यवस्थापन गर्न हामीलाई पनि समस्या छ।’
‘उनीहरूलाई नै व्यवस्थापन गर भन्न सक्नुहुन्न?’
‘ट्राफिक प्रहरीले यस्तोमा सिधै कारबाही गर्न मिल्दैन। हामीले लिने शुल्क र जरिवाना सबै महानगरको निम्ति हो,’ उनले भने, ‘यहाँ बग्गीखानामा लिने रकम पनि महानगरकै हो। ट्राफिकले राख्ने होइन।’
ट्राफिक प्रहरीले महानगरको सहकार्यमा व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र गरेको उनले बताए।
‘हामीले होटल र पार्टी प्यालेसहरूलाई आफ्नो पार्किङ आफैं मिलाउनुहोस् पनि भनेका छौं,‘ उनले भने, ‘अस्ति भर्खर सोल्टी होटलमा भएको पार्टीमा म आफैं खटिएको थिएँ। भिआइपीहरू आएका थिए। पार्किङ पुगेन। सडकमा सहज वातावरण बनाउने काम हाम्रो हो।’
एसएसपी पन्तले उदाहरण दिएको सोल्टी होटलमा त कहिलेकाहीँ पार्किङ नअटेर गाडीको लस्कर बाफलसम्म पुगेको हुन्छ।
‘पाहुनालाई गाडी नल्याओ भन्न सम्भव हुन्न। होटलमा जति पार्किङ छ त्यति बोलाउनुहोस् भने पनि हामीले भनेर हुनेवाला छैन। त्यसैले यस्ता कार्यक्रममा सडकको एक ठाउँ पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने हो।’
उनका अनुसार होटल वा पार्टी प्यालेसलाई ‘पार्किङ आफैं व्यवस्था गर’ भन्ने अधिकार ट्राफिकसँग छ। तर, विकल्प नभएकाले चुप लागेको उनी बताउँछन्।
‘कार्यक्रमै बिथोलिने गरी ‘गर्दै नगर’ भन्न पनि त भएन,’ उनले भने।
यसरी एसएसपी पन्तले सडक किनारको पार्किङ व्यवस्थापन र अनधिकृत कारबाहीको जिम्मा महानगरलाई पन्छाएपछि हामी आफ्नो प्रश्न बोकेर काठमाडौं र ललितपुर महानगर पुग्यौं।
काठमाडौं महानगरभित्र पार्किङ व्यवस्थापन तथा सुझाव समितिले यो विषय हेर्ने रहेछ।
समितिका सदस्य–सचिव तथा नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले ‘कुनै पनि होटल र पार्टी प्यालेसलाई बाहिरको सडकमा पार्किङ गर्न सुविधा नदिएको’ बताए।
‘हामीले कसैलाई त्यस्तो सुविधा दिएका छैनौं। यो सबै नियमविपरित हो,’ जोशीले भने, ‘हामीले तोकेका केही स्थानबाहेक सडकमा पार्किङ गर्नु गैरकानुनी हो। चाहे त्यो होटलअगाडि होस्, चाहे पार्टी प्यालेस।’
‘अनि किन कारबाही गर्नुहुन्न?’
‘महानगरपालिकाले हेर्ने भनेको दुईपांग्रे सवारी मात्र हो। चारपांग्रेहरू ट्राफिक कार्यालयले हेर्छ। हामीले तोेकेको स्थानबाहेक सडकमा पार्क हुने चारपांग्रे व्यवस्थापन र कारबाही ट्राफिकले नै गर्छ।’
यहाँनिर राज्यका दुई सरोकारवाला निकायको कुरा बाझियो।
ट्राफिक प्रमुख पन्तले महानगरतिर औंला देखाए। महानगरका अधिकारीले ट्राफिकलाई देखाइदिए।
त्यसो भए कसले रोक्ने हो यो अनधिकृत पार्किङ? कि ठूला मान्छेका ठूला गाडीलाई कानुनै नलाग्ने हो?
हामीले बग्गीखानामै रहेको अनधिकृत पार्किङ हेर्ने नगर प्रहरी महाशाखाका सई राजेन्द्र देवकोटासँग थप कुरा जान्न चाह्यौं।
उनले होटल–पार्टी प्यालेस अगाडिको पार्किङ मानवताका आधारमा दिइएको बताए।
‘यसमा कसैको स्वीकृति हुँदैन। सडकमा पार्किङ गर्ने अनुमति दिन पनि कसैले पाउँदैन,’ देवकोटाले प्रस्टैसँग भने, ‘त्यो कार्यक्रमका दिन पार्किङ गर्न दिने भनेको मानवताका आधारमा हो।’
‘उसो त जहाँ पनि पाइएला नि?’
‘पाइन्न। विकल्प नभएकाले केही नगरिएको हो,’ उनले भने।
देवकोटा आफैंले केही उदाहरण दिए।
मानौं, कुनै बैंकमा सेयर भर्नेको गाडी लस्कर छ।
‘अब त्यहाँ आएका सबै गाडी सडकमा पार्क गर्न दिने त? भृकुटीमण्डपमा कुनै कार्यक्रम भए सडकमा पार्किङ दिने? हुँदैन। यो नियमविपरित हो। कारबाही हुन्छ। विकल्पै नभएका ठाउँमा मात्र छुट दिने हो,’ उनले भने, ‘खासमा कुनै पनि ठाउँको पार्किङ जुन कार्यालय वा संस्थासँग सम्बन्धित हो त्यसैले गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने काम सेवाप्रदायक संस्थाकै हो। चाहे सिनेमा हल होस्, चाहे क्याफे।’
यी सबै व्यवस्थापन नमिलेकै कारण आफूहरूलाई समेत कारबाहीमा समस्या भएको उनी बताउँछन्।
ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले पनि सडक किनार पार्किङको छुट कुनै होटल वा पार्टी प्यालेसलाई नदिएको बताए।
‘सडक सबैको हो। कुनै होटल वा पार्टी प्यालेसमा आएको गाडी सडकमै पार्क गर्न पाइँदैन,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘हामीकहाँ यस किसिमको रिपोर्ट आएको छैन। आए तुरुन्तै कारबाही हुन्छ।’
यो पनि उदेकलाग्दो कुरा हो। झम्सीखेलका सडकमा हरेक शुक्रबार साँझ गाडीको ताँती लाग्छ। फाट्टफुट्ट अरू दिन पनि हुन्छ। प्रहरी भ्यान कुदेका कुद्यै हुन्छन्। महानगर भने रिपोर्ट पर्खेर बसेको छ।
कुनै पनि व्यापारिक संस्थाले आफ्नो पार्किङ आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जानेबुझेका सम्बन्धित निकायहरू ठूल्ठूला होटल र पार्टी प्यालेसका हकमा किन यति लचकदार?
आयोजक भिआइपीलाई दुःख नहोस् भनेर? कि निम्तालुलाई गाह्रो नहोस् भनेर? कि होटललाई नै असुविधा नहोस् भनेर?
यी सबैको सुविधामा सर्वसाधारणको सास्ती किन देख्दैनन्?